Topnepalnews.com | धेरै हास्नुहोला प्रचण्ड ज्यु, रोइदिने त हामी छँदैछौ ! (मर्मस्पर्शी भिडियो)
धेरै हास्नुहोला प्रचण्ड ज्यु, रोइदिने त हामी छँदैछौ ! (मर्मस्पर्शी भिडियो)
Posted on: February 17, 2017 | views: 6785
लेलीन बन्जाडेको शब्दमा शुबास शर्माको आवाज
गाउँतिर तपाईंलाई 'छविलाल' भन्छन् । तपाईंको नाममा हजारौं नेपालीको 'लाल' रगतको 'छवि' पोतिएको छ । मर्नेहरू त मरेर गए, बाँच्नेहरूको अनुहारबाट तपाईंको त्यो छवि कहिल्यै मेटिएन ।
गाउँबाट जंगल छिर्नुअघि मान्छेले तपाईंलाई 'पुष्पकमल' भनेर चिने । मैले देखेको छैन तर मान्छेहरू भन्छन्- कमल हिलोमा फुल्छ । तपाईं हिलोमा फुलेर हिलोमै मुर्झाउनुभो । हिलोमै अस्ताउनुभो ।
जंगल छिरेर तपाईं 'प्रचण्ड' बन्नुभो । 'प्रचण्ड' शब्दका अर्थ अनेक छन् । शब्दकोश भन्छ–– प्रचण्ड भनेको अत्यन्त उग्रता, तीव्रता, अत्यधिक गर्मी, भीषण, कठिन, कठोर, असह्य, भारी आदि हो ।
तर, मलाई तपाईंको नाममा उति साह्रो रुचि र चासो छैन । मलाई तपाईंको काममा चासो छ । मलाई मात्रै होइन, तिनै लाखौंको चासो छ– जसको अनुहारमा समृद्धिको छवि कोर्न तपाईंले हामीजस्तै हजारौंको छातीमा गोली, भाला र खुकुरीको बीउ रोप्नुभयो । भन्न त तपाईं त्यसलाई 'क्रान्ति' भनेर अर्थ्याउन खोज्नुहुन्छ । अनि म बेलाबेला हाँस्छु । हाँस्नु मानसिक स्वास्थ्यका लागि हितकर हो ।
तर छाड्दिनुस् । यो तपाईंको चासोको विषय होइन । तपाईंको चासो अरुतिरै छ । त्यो 'अरुतिरै'को चासोले हामीप्रतिको चासो कता मुर्झायो कता !
थाहा छ– अस्ति फागुन १ गते तपाईंहरुले 'जनयुद्ध' दिवस भन्ने गरेको नरसंहार दिवस मनाइरहँदा मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ, "‪माओवादीले 'जनयुद्ध'को नाममा सोझा-साझा नेपाली माऱ्यो । त्यसपछि कहिल्यै माखो मारेन !"
यसको मुनि एकजना सज्जनले लेख्नुभयो, "भाग्यमानी रहेछौ तिमी छुटेछौ । फेरि अर्को जनयुद्ध सुरु हुने अवस्था आयो भने रोल नं. १ तिम्रै हुनेछ । किनकि यस्ता भाइरसको अन्त्य हुनु जरुरी थियो र छ !"
'प्रचण्डपथ'ले दीक्षित गरेका यस्ता सज्जनको अनुहार देख्दा म तपाईंलाई सम्झिन्छु ।
यो लेख पढेर फेरि पनि यस्तै प्रतिक्रिया आउनेछन् । ती सज्जनहरू मलाई एमाले, कांग्रेस, मसाल या अरु कुनै दलको प्रमाणित गर्न मरिमेटेर लाग्नेछन् । यिनैमध्ये एक दलले मलाई पुस्तैनी पुग्ने गरी खल्ती भरिदिएको लेख्नेछन् । कतिले 'सफाया' गर्नुपर्छ भन्नेछन् ।
'प्रचण्डपथ'मा हिँडेका ती सज्जनहरूको अनुहार देख्दा म तपाईंलाई सम्झिनेछु ।
प्रचण्डपथको डिजाइनमा कहाँनेर गल्ती गर्नुभयो र त्यो बाटैभरि कसरी यति ठूला भ्वाङ परे, कहिलेकाहीँ रिसोर्ट जाँदा समीक्षा गर्नुहोला । नत्र ती खाल्डामा परेर तपाईं हरेक क्षण लडिरहनुहुनेछ । जसरी मेलम्चीको पाइप बिच्छ्याउन खनिएको बाटो नपुर्दा हरेक दिन कैयौं सवारी लड्छन् । कति बाँच्छन्, कति मर्छन् । बाँच्ने केही 'भाग्यमानी' पात्रमध्ये दुईजना मेरै घरमा छन् ।
'प्रचण्डपथ' टेकेर शिखर चढें भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुस् त कति होचो हुनुभएछ !
तपाईंलाई थाहा छ– अचेल हामीले फेर्ने सासमा २% अक्सिजन, ७८% राजनीति, १०% मेलम्ची र १०% वर्षौं पुराना थोत्रा गाडी मिसिएका छन् । तर, तपाईंहरूले फेर्ने सासमा मेलम्ची र गाडी मिसिँदैन । नाकबाट फोक्सोसम्म मेलम्ची र थोत्रा गाडी नछिरून् भनेर हामी उठेदेखि नसुत्दासम्म मुखभरि मास्क लगाउँछौं । तपाईंहरू मार्क्सका सिद्धान्त पढेर 'मार्क्सवादी' बन्नुभयो, हामी मेलम्ची र थोत्रा गाडी छल्न 'मास्कवादी' भयौं । काँधमा झोला बोकेजस्तै अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर हिँड्न सक्दैनौं । जसोतसो हामी त हिँडौंला, स-साना नानीहरू कसरी हिँड्लान् !?!
तपाईंहरू त 'वाद'को पुच्छर समातेर यो भीमकाय मृत्युसागर तैरिनुहुन्छ । तपाईं 'माओवाद' समातेर बाँच्नुहोला, 'जनवाद' समाएर केपी र झलनाथहरू बाँच्लान्, 'समाजवाद' समाएर थुप्रै खुमबहादुर र देउवाहरू बाँच्लान् या मधेसवाद समातेर महतो र यादवहरू बाँच्लान्– हातमा कुनै पुच्छर नहुने हामी कामकाजीहरू त यही सागरमा डुबेर मर्छौं ।
'सर्वहारा जनताको अधिकार स्थापित गर्न' लड्दालड्दै तपाईं आफैं 'सर्वआहारावादी' भएको हेक्का राख्नुभयो कहिल्यै ?
तपाईंले त 'म प्रचण्ड हुँ' भन्नुभयो भने पनि म अचेल तीन पटक सोच्छु । मेरो मनमा कति धेरै अविश्वास भरिदिनुभयो तपाईंले !
यस्तो सुन्दा र पढ्दा मुर्मुरिएर हाँस्नुहुन्छ होला । हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि फलदायी छ । आफैं नहाँसे सिंगो देशलाई कसरी हँसाउन सक्नुहुन्छ र ! तपाईं धेरै हाँस्नुहोला– रोइदिने त सवा ३ करोड हामी छँदैछौं !
दार्जीलिङमा घट्यो डरलाग्दो घट्ना, आयो नसोचेको खबर (भिडियो सहित)
कोमल वलीको तीज गित 'लास्टै चोटी हो'